Waan Hin Hafne Itti Qophaa’amuu Qabu! – AMBO TV
AMBO TV AMAJJI 1, 2021
Yeroo rakkoo keessa jiran halkan tokko iyyuu nama barii’uu didee ni dheerata. Haa tahu malee lafti barii’ee biiftuun bahuun waan hafu miti.Ummatni qabsoo irra jirus akkuma kana cinqii diinni irraan gahuun muddame guyyaa bilisa bahuee eegachaa ciniisfataa jiraata. Guyyaa guyyaan saamamuun, waxalamuun, hidhamuun, ajjeefamuu fi walii gala gidirfamuun guyyaan garbummaa jalatti dabarsu dheeraa tahee itti dhaga’ama. Waan hin dabarre hin jiru guyyaan cinqii kunis ni darba. Waan har’a keessa jirru dagannee kan dhaloota Oromoo boru bilisa tahuuf barbaachis yaaduu qabna. Daloota boruuf yoo yaadne malee kosiin akka OPDO yaada bareedaa kamuu hojii irra oolchitti jedhanii eegachuun abdii hin qabu.
Uummatni Oromoo bilisa akka tahu maal ragaa qabda namni naan jedhu hin dhibu taha. Ragaan gahaan bu’ureefamuu ABO it. Warri ABO bu’ureesse Ebla 15, 1980 harka diinatti kufanee namni kudha tokko boola tokkotti owwaalamanii jiru. Kaayyoo fi akeekni isaan Uummata Oromoof diriirsan kunoo bara baraan jiraataa jira. ABOn kaayyoo fi akeeka bilisummaa malee ijaarsa qofaa miti. Umurii koo kana keessa ijaarsonni Habashaa meeqa ijaaramanii meeqa akka badan argeera. Mootummaan Habashaa warri ABO balleessuuf agama ture tokko lamaan wal duraa booda yaroo badan argaa jirra. Kan godhanii darban yoo jiraate ilmaan Oromoo qaroo tahan ajjeessanii darbuu dha. ABO ijaarsaa achi afuura kaayyoo fi akeeka bilisuummaa waan taheef baduu hin dandeenye. Baduu hin danda’us.
Mootummaan Haayile Silaasee, Mengistuu Haayile Mariyaam, Malasaa Zenawii, Haayilee Mariyaam Dasaleenyi hunduu utuu ABO balleessuu carabaa jiranii of badan. Har’as Mootummaan Kononeel ABiyi hallayyaa gubbaa dhaabbatee ABO balleessuuf falmaa jira. Tasa hin milka’u. Kononeel Abiyitu bada malee ABO baduu hin danda’u. Namni ABO balleessuu danda’u nama Uummata Oromoo balleessuu danda’u qofa. Uummata Oromoo guddaa kana miti uummta lakkoobsaan xiqqaa tahe iyyuu balleessuun hin danda’amu. ABO balleessuuf namonnii sammuun dudaa akka OPDO ilmaan Oromoo ajjeesaa olu.
Mee waan Opdoo dhiise gara yaada koo olitti kaasee haa deebi’u. Hooggantoonni Seera Gamtaa Tokko Ameerikaa(United States America constitution) gaafa duraa bu’ureessaan baayyee qara waan tahaniif fageessanii ilaaluudhan seeraa baayyee jabaataa tahee bu’uran. Utuu seerri sun hin jiraanee Donald Trump prezedaantiin Ameerikaa har’a jiru kun akkuma hiriyootaa isaa Mootota Afrikaa abbaa ire taha ture. Karaa danda’e maraan faallaa adda Mootummaa Ameerikaa isaa dura turanii dhaabbachuu barbaada. Filmaata godhame irrattis mo’amuu isaa fudhachuu didaa jira. Yaroo 46 mana seerattii akka filmaata kana mormuun iyyaata dhiyeefatee fudhatama tokko utuu hin argatiin jira. Abbootii seera kan baayyee isaanii isatu muddee. Seera lafa sanaaf malee isaaf dantaa isaa tiksuuf dirqama hin qaban. Amma ammaas mo’ameera jechuu hin fedhu. Garuu akka seerri Ameerikaa itti Amajii 21, 2021 warri nagaa eegu morma iaa qabee mana mootummaa (White House) keessa gadi isa baasee karaa itti agarisiisa. Maaliif yoo jenne seera isaanitu bu’ura tolee jira.
OPDOn Uummatni Oromoo ilmaan isaa kumaataman itti aarsaa godhee mootummaa kenneef Nafxanyootaaf dabarsitee laachuudhaan badii Gaanfa Afrikaa hundaa mudachaa jiruuf itti gaafatama duraa fudhachuu qabdi. Erga gara aangoo dhuftee Uummata Oromoo tajaajiluu dhiftee Uummata Oromoo daraaraa jirti. Qabeenya uummata keenyaa saamamuu fi barbadeessuun kan durii caalaa itti fufee jira. Hidhaa, ajjeechaa fi gidiraa adda addaa uummata keenya irratti raawwatamu dangaa dhabeera. Komandii postiin buluun hiree Uummata Oromoo tahee jira. Mana keessaa baasanii ajjeesanii binseesaa darbun, mana hidhaa keessaaa baasanii ajjeessanii alaattiin laachuun hojii OPDO isa duraa taheera. Eessaa gahuuf deemuu? Uuummatni kun haalla kanaan jaalatee yookan sodaatee nuuf bula jedhanii yaaduu? Maaliif seenaa isaanii darbe irraa hin baratan?
Aangoo irra kan turan dimmaa yaroo ittiif malee waan jabina isaanii ilaalu miti. Kanaafuu dhalootni boruu Oromiyaa bilsoomtees tahe federaala keessatti mataa isheen of bulchitu jalatti afaan hojii fi barumsaa kan ilaalu maal gochuu akka qabu yaada kanaa gadii dhiyeessuun fedha:
Ijoolleen afaan dubbachuuf afaan banateen barachuun baruumsa irratti gargaarsa guddaa qaba. Kanaafuu ijoolleen Oromoo Afaan Oromoon qofa barumsa eegaluu qabdi. Akkuma kana afaan Hojii Oromiyaa guutuu keessatti afaan Oromoo tahuun dirqii dha.
Afaan lamaffaa iittiin baratamuu qabu afaan Inglizii yoo tahe mishooma hedduu qaba. Afaan Inglizii, afaan saayinsii, afaan teknoologii, afaan diploomasii fi afaan biyyi lafaa ittiin wal quunnamuu waan taheef bu’aa guddaa qaba. Hojiifis Afaan Inglizii yoo filatnee namoota baratanii dinagdee biyya keenyaaf bu’aa kennuu danda’an hojjechiifachuu dandeenya. Kana malee biyyootaa fi Warshaa hoomishaaf (investment) biyyaa keenya dhufuu barbaadan ni hawwata.
Karaa biraa abbaan barbaade biyya Oromoo keessatti Afaan Oromoo dirqiin dubbachuu yookan barachuu hin qabu. Garuu Mootummaan tajaajila afaan biraa hin keennuuf. Biyya Oromoo keessatti hojii uuummata tajaajiluuf sarmaa argachuuf hojiin hojjetamuu afaan Oromoon tahuu qaba.
Afaan kam iyyuu barachuun rakkina hin qabu. Barumsa gulantaa lammaafaa ol ijoollee Oromoo fedhii isaaniin Afaan barbaadan barachuu danda’u. Gara fuula duraa qophinni afaanii yoo godhame Afaan Siwaalii, Afaan Somalee, Afaan Arabaa fi Gi’ezii biratti afaan Farasaayii fi Chaayina yoo kennaman gaarii dha.
Waan beekamuu qabu Afaan Amhaaraa fi aadan Amhaaraa marxoo garbummaa mataa keenya irratti marannee deemnu waan taheef jireenya keessa baafnnee gatuu qabna. Afaan Amharaa dubbachuu fi ittiin hojjechuun mallattoo garbummaa ti. Amhaarri afaan isaa fi aadaa isaa biyya lafaa fudhachiisuuf kutatee ka’ee jira. Maqaa Amantiin lafni Oromoo saamame hunduu harkaa sarbamuu qaba. Gaafa manni Ammanataa Oromoo Ortodoksii Siniddos akka dhaabbatu yaadiin ka’e Uummatni Oromoo bilisummaaf akka dhiyaate abdii irra darbee akka dhugoome mirkannaa jira. Kana booda karaan nafxanyoonni Uummata Oromoo dogongorsu danda’an cufameera.
Qabsoo Uummatni Oromoo godhu caalaa OPDOn funyoo mormatti of martee of fanisaa jirti. Uummatni Oromoo biyya keessaa fi ala harka wal qabatee WBO jajjabeessaa wajjiin gara fuula duraa tarkaanfachuu qabna. Guyyaan bilisummaa faagoo hin jiru. OPDOn gatatni maqaa Oromoon daldaltuu amma har’a ilmaan Oromoo ajjeessuun ABO ajjeessuu akka hin taane hubachuu qabdi ture.
Admin -January 28, 20200BBC Afaan Oromoo: ODUU Owwituu, Amajjii 27, 2020Read moreAfaan Oromoo
Admin -April 13, 2020121 million Chinese died of coronavirus – US intelligence officials intercept data By James Alami (Web Archive) — A new data intercepted by the United States…Read moreAfaan Oromoo
Admin -February 20, 20200OMN: ODUU GALGALAA (GURRAANDHALA 20, 2020)Read moreAfaan Oromoo
Admin -September 4, 20196Book: የተጠለፈ ትግል (The hijacked revolution) in PDF Via Aba Orma, September 3, 2019 የተጠለፈ ትግል (The hijacked revolution) Author: Mudhin Siraj Pages: 152 Language: Amharic Year: July 2019 To…Read moreAfaan Oromoo
Admin -July 4, 20201ODUU AMMA NU GAHE! – Oduu Injifannoo Wbo Adooleessa 4, 2020 Baga Gammadan Baga Gammannee! Wbon Gumaa Ilmaan Oromoo Baasuu itti fufeera! Guyyaa har’aa Lola Cimaa Zoonii Lixaa, Zoonii…Read more
© Ambo Tv 2021. Disclaimer: All views expressed on this site are opinion of our authors and Ambo Tv is responsible for the content.
Previous PostHiikkaa Google Afaan Oromoo Irratti Haa Hirmaannuu
Next PostDhaamsa Bara Haaraa HD ABO Irraa Amajjii 2021